Best Buy and Home Depot Black Friday 2010 Ads And Deals | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Steal Deal » Best Buy and Home Depot Black Friday 2010 Ads And Deals
Posted by kai on Nov 25, 2010 in Steal Deal, U.S. News | 1 comment
အခုသောကြာဆို အားလုံးစောင့်နေတဲ့ Black Friday ရောက်ပါပြီ။ ဖလိုင်ယာတွေ ပီဒီအက်ဖ်နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်..။ နောက် ဈေးလျှော့တာတွေလည်း တင်ပေးထာပါတယ်.။ အစောဆုံးဖွင့်တာက .. Kojl’s မနက်၄နာရီပါတဲ့..။ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် ကျေးဇူးတော်များနေ့မှာတင် လျှော့နေတာမို ့.. တီဗီမှာပြတာ.. Best Buy ရှေ ့ည၁၁နာရီတင် လူတွေတန်းစီနေကြပါပြီ။
ဒီနှစ်တော့ လူနင်းသေကြသူမရှိဖို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ..။ မြန်မာတွေသတိတော့ထားပေါ့နော..။ အရင်တမြန်နှစ်ကသေတဲ့ လူဆိုတာကလည်း အကောင်သေးသေးမဟုတ်တာမို ့.. လူထောင်နဲ့ချီတိုးရင် .. မြန်မာလို အာရှသားတွေအတွက် .. အန္တရာယ်ရှိတာပါ..။
ဝယ်စရာတွေစုထားပြီး .. အင်တာနက်ကနေ ..များများဝယ်ပေါ့..။ သတိထားရမှာက .. Shipping ဈေးနှုန်းပါ။ မသိမသာ ..ပြန်ယူတတ်တာမို ့.. Shipping Charge ကိုအရင် စစ်ဆေးကြစေလိုပါတယ်..။
နောက်တခုက ..ကရက်ဒစ်ကဒ်တွေသုံးတဲ့နေရာမှာသတိထားပါတဲ့..။ SSL ပါပြီးနာမယ်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေမှာပဲဝယ်သင့်ပါတယ်..။